Zimbabwe army won't allow opposition to rule - minister | Biz News Letters
Daily Mail: Zimbabwe army won't allow opposition to rule - minister
2018-05-23 (145 Days Old)Total Views: 45 | Last 7 Days: 2
HARARE, May 23 (Reuters) - Zimbabwe's government distanced itself on Wednesday from a deputy minister who said the army wouldn't allow the opposition to...
Baby is mauled by a BABOON that sank its teeth into her face in Zimbabwe. The one-year-old girl was with her brother, 12, outside their home in Victorian Falls, Zimbabwe, near the famous waterfall, when the baboon turned violent and only let go when her mother hit it. >>
Crocodile attack bride: 'Every day I wake up happy'. Zanele got married to her partner Jamie days after losing her arm in a crocodile attack in Zimbabwe. >>
NOT REAL NEWS: False comments attributed to Zimbabwe leader. The president of Zimbabwe did not say people in his country have been reduced to eating animals like rats and baboons because of "mistakes of the past" with white farmers, as at least two online sites claim. >>
NOT REAL NEWS: False comments attributed to Zimbabwe.... HARARE, Zimbabwe (AP) - The president of Zimbabwe did not say people in his country have been reduced to eating animals like rats and baboons because of... >>
Zimbabwe applies to re-join Commonwealth, invites poll.... HARARE, May 21 (Reuters) - President Emmerson Mnangagwa has officially applied for Zimbabwe to re-join the Commonwealth it left in 2003 and has invited the... >>
Zimbabwe army won't allow opposition to rule: minister. HARARE (Reuters) - Zimbabwe's government distanced itself on Wednesday from a deputy minister who said the army wouldn't allow the opposition to rule if it wins an election this year. >>
Zimbabwe bans banks from processing payments for cryptocurrencies. HARARE (Reuters) - Zimbabwe's central bank has stopped local banks from trading or processing payments linked to cryptocurrencies like bitcoin, its governor said on Monday, but stopped short of banning local cryptocurrency trading exchanges. >>
Zimbabwe entrenches state TV monopoly with second broadcasting license. HARARE (Reuters) - Zimbabwe has given its second-ever television broadcasting license to a state-owned newspaper group, entrenching the government's monopoly over the broadcast media ahead of elections expected in a few months. >>
Zimbabwe entrenches state TV monopoly with second.... HARARE, May 16 (Reuters) - Zimbabwe has given its second-ever television broadcasting licence to a state-owned newspaper group, entrenching the... >>
Zimbabwe mines need $11 billion investment to modernise. By MacDonald DzirutweVICTORIA FALLS, Zimbabwe, May 18 (Reuters) - Zimbabwe needs up to $11 billion to modernise its mines and boost production to maximum... >>
Zimbabwe public workers reject higher government salary.... HARARE, May 15 (Reuters) - Zimbabwe's public sector workers have rejected an improved salary offer of 15 percent from President Emmerson Mnangagwa's... >>
Zimbabwe warns against cryptocurrencies. Zimbabwe's central bank on Monday warned against trading in cryptocurrencies, saying virtual currencies such as bitcoin were not regulated in the... >>
Zimbabwe will run out of beer within ONE WEEK. Zimbabwe drinkers have been warned the country's largest brewery only has enough raw ingredients to last a week sending prices of the nation's favourite beer rocketing. >>
Zimbabwe's Mnangagwa raises war veterans pensions ahead.... HARARE, May 11 (Reuters) - President Emmerson Mnangagwa said on Friday that pensions and allowances for veterans of Zimbabwe's independence war would be... >>
Zimbabwe's Mnangagwa rallies war veterans ahead of vote. Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa on Friday urged war veterans to play a central role in campaigning for the ruling ZANU-PF party ahead of elections... >>